Funda 2 iMigaqo neMiqathango yoRhwebo | Ukwaphuka okupheleleyo kweT & C
Funda iiMeko neMeko zoRhwebo ezi-2
Ngokusebenzisa Funda ukuRhweba 2 iwebhusayithi uyavuma kwaye uyayiqonda imigaqo yokusetyenziswa kunye nengxelo yabucala kweli phepha.
Yonke imizamo yenzelwa ukwabelana kuphela ngolwazi oluvela kwimithombo esemthethweni. Nangona kunjalo, funda 2 urhwebo alunakho ukuqinisekisa ukuba zonke iinkcukacha kunye nolwazi olufumanekayo kwinkonzo yalo luchanekile ngokupheleleyo. Kananjalo, funda 2 Urhwebo alunakubekwa tyala ngayo nayiphi na ilahleko egcinekileyo.
Ngapha koko, funda 2 urhwebo unelungelo lokwenza utshintsho kwiphepha lamalungu, ubume bezorhwebo, okanye iwebhusayithi ngokubanzi kwisigqibo sayo, ngaphandle kokunikezela kwangaphambili.
Ngenxa yobunzima betekhnoloji, kunokubakho amaxesha apho ukungasebenzi kakuhle konxibelelwano okanye iwebhusayithi ye-Learn 2 Trade ingasebenzi. Kananjalo, funda uRhwebo 2 ayizukuthatha naluphina uxanduva kwimizamo ye-imeyile engaphumelelanga, umda wendlela okanye imiba yesiginali, okanye nakuphi na ukusilela kwentsimbi. Funda urhwebo lwe-2 alunakuze kwaye alunakuqinisekisa ukuba indawo okanye iqonga liya kuhlala lihlala lisebenza ngokugqibeleleyo.
Funda 2 Urhwebo aluyi kuthwala xanduva lokungahoyi okanye ukusilela kwalo naliphi na iqela lesithathu, ngokubhekisele ekubekweni esweni, ii-imeyile ezingafunyanwa kwangexesha, okanye ukufika emva kwexesha ngemiqondiso okanye ngekhalenda. Akukho kucingelwa ukuba makwenziwe ukuba naziphi na izikhombisi, iindlela zorhwebo, uhlaziyo lwetshathi, okanye ubuchule obuya kukhokelela kwinzuzo. Kwaye akunakucingelwa ukuba iziphumo aziyi kuba yilahleko yemali. Iziphumo ezivela kwimbali azibonisi ukuba kuya kwenzeka ntoni kwixesha elizayo.
Nawuphi na umzekelo onikwe kwiphepha lokuFunda 2 loRhwebo wenzelwe izibonelelo zemfundo kwaye ayibonisi imiyalelo yokuthenga okanye yokuthengisa. Kananjalo, amahlakani, ababhali kunye nababhali abathathi tyala ngayo nayiphi na inzuzo okanye ilahleko egcinwe ngexesha lokurhweba kwakho. Ukuthengwa kunye nokuthengiswa kwee-indices, i-cryptocurrensets, isitokhwe, izinto zorhwebo, i-forex, nazo zonke izixhobo ezinokuthengiswa kubandakanya ubungozi
Akukho siqinisekiso okanye siqinisekiso sokuba naziphi na iziphumo zorhwebo ezithiwe thaca ziya kukhokelela kwinzuzo kurhwebo lokwenyani. Kukho umahluko omkhulu phakathi kwenkcazo-ntetho kunye nesiphumo sehlabathi lokwenyani kwiqonga lokuthengisa. Ngaphaya koko, nayiphi na imizekelo ebonelelwe ngorhwebo lwezezimali ayibonisi ngokucacileyo ingozi yokwenene yelahleko enokubakho xa kuthengiswa ngokunyanisekileyo. Iziphumo ezifunyenwe ekuthengeni nasekuthengiseni ziya kuxhomekeka kuluhlu olubanzi lwezinto ezinefuthe kunye nolawulo kwimarike.
Funda 2 Urhwebo alunatyala nangayiphi na indlela kwiziqulatho ezinelinki ezisuka kuthi okanye -kubhodi yemiyalezo okanye iwebhusayithi. Naluphi na amakhonkco anikiweyo aya kusetyenziswa ngokokubona komfundi kwaye anikezelwa ngeenjongo zokufikeleleka kuphela. Asinakulawula umxholo wewebhusayithi yayo nayiphi na indawo oyingenisileyo ngeFunda 2 yoRhwebo. Ngapha koko, ikhonkco kwelinye iqonga alibonisi nangayiphi na indlela ukuba sinoxanduva lomxholo obandakanyiweyo, kwaye oko akuthethi ukuba siyawuxhasa.
Akukho kuziphatha gwenxa kwi-Intanethi kuya kuvunyelwa kwi-Learn 2 Trade. Oku kubandakanya ukuhambisa iwebhusayithi okanye iinkonzo zemiyalezo ngayo nayiphi na into ehluphayo, engamanyala, engekho mthethweni, yobuhlanga, ecacisa ngokwesini, engcolileyo, eyoyikisayo, engamanyala, enobungozi, ehlambalazayo, ehlukumezayo, enenzondo, eyoyikisayo okanye ehlaselayo.
Oku kukwabandakanya umxholo ojolise ekukhuthazeni okanye ekwenzeni ubuqhetseba, obangela uxanduva loluntu, isenzo solwaphulo-mthetho, ukuphathwa gadalala komthetho womdibaniso, wasekhaya, owamazwe aphesheya, okanye urhulumente. Xa usebenzisa iwebhusayithi yokuFunda yesi-2 uyavuma ukuba ungaphathwa gadalala nangayiphi na indlela okanye ungcungcuthekise naliphi na iziko okanye umntu. Bonke abantu bayayiqonda into yokuba akuvumelekanga ngokungqongqo ukuthumela okanye ukwabelana ngemiyalezo yezorhwebo engamkelekanga (okuthetha ukuba ugaxekile).
Funda 2 Urhwebo unelungelo lokuveza naluphi na unxibelelwano ngombane okanye umxholo wabasebenzisi abona kufanelekile (i) ukulungiselela izicelo zikarhulumente, imigaqo, okanye imithetho; (ii) ukubhengeza oku kungentla kubalulekile okanye kuyadingeka ekusebenzeni kwewebhusayithi, okanye ukukhusela ipropathi okanye amalungelo oLwazi 2 loRhwebo kunye nabaxumi bayo.
Sinelungelo lokuthintela naziphi na izinto, unxibelelwano, okanye isimilo ngokubanzi esicinga ukuba, ngokokubona kwethu, sonakalisa, okanye asikho semthethweni, kuwe, kubaxhasi bethu, iisayithi zomntu wesithathu, abahlobo kunye nabasebenzisi beLearn 2 Trade . Ngaphandle koku kuchazwe apha ngasentla, akukho bantu sinxulumana nabo okanye ufunda 2 urhwebo onokuqinisekisa ngokususwa kwangoko kwezinto ezingafanelekanga ezithunyelwe kwi-Intanethi.
Akukho ngcebiso yotyalo mali okanye iingcebiso zobungcali
Amaqhinga kunye nesikhokelo akufuneki sithathwe njengesicelo okanye isindululo sokuthenga, okanye isindululo sokuthengisa. Naziphi na iingcebiso ezibandakanyiweyo azilungelelaniswanga kumfundi omnye kwaye endaweni yoko zenziwa ngokubanzi. Funda 2 Urhwebo ayingomcebisi wotyalo mali. Kananjalo, naziphi na iingcebiso, imiqondiso, kunye nezimvo azenzelwanga ukuba zisetyenziswe njengengcebiso yotyalo mali. Abafundi banoxanduva ngokupheleleyo kulo naluphi na urhwebo okanye utyalomali abakhetha ukuluthatha.
Ngapha koko, abasebenzisi kufuneka bafumane ukuqonda okucacileyo kwezibophelelo zomthetho kunye nezerhafu ngokufuna ingcebiso kwigqwetha okanye kwingcali yerhafu.
Inkonzo yeNkulumbuso enikezelwa kwiLearn 2 yoRhwebo iza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30, oku akusebenzi ukuba ikhowudi yesaphulelo isetyenzisiwe ekuphumeni, ngekhowudi yesaphulelo akukho mbuyekezo ikhutshiweyo kuyo nayiphi na imveliso ye-Learn 2 Trade . Kufuneka ucele ukubuyiselwa imali ngokubhaliweyo zingaphelanga iintsuku ezingama-30. Oku kunokwenziwa ngokungena kwi iakhawunti yakho. Nje ukuba ufake iinkcukacha zakho zokungena ungangena kwiphepha lokurhoxisa ngokunqakraza ukuCima.
Ukugcwalisa ukurhoxiswa kwakho kuya kufuneka ukuba ubonelele ngegama lomsebenzisi weTelegram. Nceda uqaphele ukuba ukuba awukenzi igama lomsebenzisi leTelegram kuya kufuneka ugcwalise eli nyathelo ngaphambi kokuba siqhubeke nesicelo sakho. Ngena nje kwi-app yeTelegram kwaye ucofe useto, lulandelwe ligama lomsebenzisi. Emva koko, yenza igama lomsebenzisi elingathathwanga. Isazisi sakho siza kuqala ngo- @:
Kubalulekile ukuba usinike igama lomsebenzisi, njengoko ngaphandle kwalo Funda 2 ukuRhweba akunakususa kwiqela lePrimiyamu yeqela. Ukuze sikwazi ukucima umrhumo wakho kunye nokucima intlawulo ephindaphindayo, kuya kufuneka usinike nedilesi ye-imeyile oyisebenzisileyo xa ubhalisa noFunda u-2 woRhwebo.
Akuvumelekanga ngokungqongqo ukusebenzisa, ukukopa, ukwenza ikopi okanye ukuxhaphaza naliphi na icandelo lewebhusayithi ye-Learn 2 Trade ngazo naziphi na iinjongo zorhwebo ngaphandle kokufumana imvume ebhaliweyo kuqala. Kwaye awuvumelekanga ukuba usebenzise isakhelo okanye izixhobo zokuthwebula ukufumana umxholo okhethekileyo njengeempawu zorhwebo, iilogo, iifom, isicatshulwa, uyilo, okanye imifanekiso ngaphandle kokufumana imvume ebhaliweyo.
Funda 2 Urhwebo aluniki mvume kuwo nawaphi na amaqonga omntu wesithathu ukwenza imiyalelo ezenzekelayo. Kwaye asivumeli naliphi na elinye iziko ukuba lenze isakhiwo esizenzekelayo okanye inkqubo eyenziwe yokulinganisa imiqondiso yethu yorhwebo.
Funda imigaqo-nkqubo emibini yorhwebo
Funda 2 Urhwebo unelungelo lokwenza utshintsho kwimigaqo-nkqubo, imigaqo yokusetyenziswa, kunye newebhusayithi yayo nanini na-ngaphandle kokwazisa amalungu ayo. Abathengi banoxanduva lokuphendula rhoqo ngokujonga umgaqo-nkqubo wabucala kunye nemigaqo nemiqathango yalo naluphi na utshintsho olwenziwe kutshanje. Ngapha koko, funda ukuRhweba 2 kuya kuhlala kugcina idatha yakho ngeenjongo zokwenza umntu. Ukuba ungathanda ukuba sisuse lonke ulwazi lwakho-ngaphakathi kweeyure ezingama-72, nxibelelana noFunda u-2 uRhwebo uxhaso lwabathengi ngesicelo esibhaliweyo.
Ngokusayina kwiakhawunti yePremiyamu kwi-Learn 2 Trade, uyavuma ukuhlawula nayiphi na intlawulo enxulumene nenkonzo. Uvunyelwe ngokungqongqo ekwabelaneni nomntu wesithathu naziphi na izinto ezithunyelwe kuwe njengelungu leNkulumbuso ye-Learn 2 Trade. Oku kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumanqanaba exabiso lokungena, ikhalenda, kunye nezaziso zomqondiso, nazo zonke ezinye iinkonzo okanye iingxelo ezithunyelwe kuwe. Ukuba kukho ukwaphulwa kwemigaqo yokusetyenziswa, funda uRhwebo 2 unokurhoxisa ubulungu bePremiyamu njengoko sibona kufanelekile.
Funda 2 Urhwebo alucalucaluli, phantsi kwazo naziphi na iimeko. Asisoze senze ukwahlula ngenxa yenkolo, ubudala, imvelaphi yobuzwe, isini, isini, okanye ubuhlanga.
Iimpawu zethu zorhwebo
Zonke izikripthi, iilogo, amagama enkonzo, ii icon zeqhosha, imizobo kunye nezihloko zekhasi zezi 2 zorhwebo. Ezo mpawu zentengiso azivumelekanga ukuba zisetyenziswe ngokudibeneyo nayiphi na inkonzo okanye iwebhusayithi engafundanga urhwebo 2.
Oku kubandakanya ilogo okanye inkonzo eboniswayo ngendlela enokuthi ilahlekise abathengi okanye ichaphazele indawo. Iimpawu zorhwebo ezingezizo ezokuFunda 2 Urhwebo lolwabanini abahambelanayo, abanokuthi baxhaswe okanye bangaxhaswanga, abanxulumene nabo, okanye abaxhumeke kule ndawo.